खेलकुद – Online BudhaNilkantha
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीको प्रभावशाली जीत
काठमाडौं – कोरोना भाइरसको महामारीपछि सुरू भएको इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले प्रभावशाली जीत दर्ता गरेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीले आर्सनलमाथि ३–० को जीत दर्ता गरेको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै अग्रता बनाएको थियो । इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा रहीम स्ट्रर्लिङ्गले गोल गरेर सुरुवाती अग्रता दिलाए । ५१ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा केविन ड्री ब्रुयनाले गोल गरेपछि सिटीले अग्रता दोब्बर पार्‍यो । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको पहिलो मिनेट अर्थात ९१ औँ मिनेटमा फिल फोडिनले गोल गरेपछि सिटी ३–० ले विजयी भयो। जीतपछि दोस्रो स्थानको सिटीको २९ खेलबाट ६० अंक भएको छ । आर्सनल ४० अंकसहित नवौँ स्थानमा छ ।
बार्सिलोनाको टिमसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन् सेटिन
काठमाडौं – यही वर्षको जनवरीमा बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका क्विकी सेटिन आफ्नो टिमसँग विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । लास पल्मास र रियल बेटिसमा मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका सेटिन बार्सिलोनाका पूर्व प्रशिक्षक एर्नेस्टो भाल्भार्देलाई क्लबले बर्खास्त गरेपछि बर्नबेउ आएका हुन् । ‘हामीसँग भएको टिमसँग कुनै शंका छैन तर, हामीले यो सिजनमा सबै ठाउँमा राम्रो गर्नेमा शंका छ, हामी आफ्नो खेल शैलि परिवर्तन गछौं,’ कप्तान लियोनल मेस्सीले एक अन्तरवार्तामा भने, ‘म भाग्यमानी छु । कि मैले हरेक सिजनको च्याम्पियन्स लिग खेल्ने अवसर पाइरहेको छु । तर, यहिँ खेलले तपाईले जित्न सक्नु हुन्न् ।’ क्याम्प नाउ आएपछि सेटिनले राम्रो फुटबल खेलाउने बचन दिएका थिए । तर, मेस्सीको उक्त अभिव्यक्तिले बार्सिलोनामा सेटिनको शैलिमा फुटबल अगाडि बढ्न सकेको छैन । सेटिन प्रशिक्षक भएर आइसेकपछि बार
नेइमारले आँसु थाम्नै सकेनन्, बार्सिलोना जान नपाएपछि अति निराश
पछिल्ला केही महिनादेखि चर्चामा रहेको नेइमारको बार्सिलोना फिर्ती तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । यो समरमा उनले चाहेको बार्सिलोना पुनरागमन सम्भव भएन । दुई वर्षअघि बार्सिलोनाबाट विश्व कीर्तिमानी मूल्यमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पिएसजी) गएका हुन् । तर उनी यो सिजन जसरी पनि पुरानो क्लब बार्सिलोना फर्किन चाहन्थे । त्यसका लागि नेइमारले व्यक्तिगत रुपमा पुग्ने जति प्रयास गरेका हुन् । तर पिएसजीले कम रकममा उनलाई जान नदिने र बार्सिलोना ठूलो रकम तिर्न तयार नहुँदा नेइमार कम्तिमा आउँदो जनवरीसम्मका लागि पिएसजीका खेलाडी हुन् । स्पेनिस रेडियो एल चिरिङगुइतोका अनुसार पिएसजीमै रहनु पर्ने थाहा पाएपछि नेइमार रोएका थिए। पिएसजीले आफूलाई जान दिनका लागि पहल नगरेकोमा नेइमार निराश र आक्रोशित भएको बताइएको छ । नेइमार अति नै निराश भएको र उनलाई यस्तो निराश कहिले पनि नदेखेको उनका निकटष्थतले बताएका छन् ।
३ नेपालीलाई कोरोना लागेको पुष्टी, को हुन उनीहरु ? (1243)
बालुवाटारमा नेकपा शीर्ष नेताको निर्णायक छलफल सकियो, पार्टी अब नटुक्रिने !
काठमाण्डौंमा ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना संक्रमित थपिए !